Indlu esemaphandleni enendawo yokubasa umlilo kwipaki yelizwe - I-Airbnb
Indlu esemaphandleni enendawo yokubasa umlilo kwipaki yelizwe
Indawo yokuhlala ikufutshane neentaba, indalo, imilambo, amachibi kunye neendawo zokutyibiliza kwikhephu. Le ndawo yokuhlala ibalungele abantu abathandanayo, abahambi abahamba bodwa, iintsapho (ezinabantwana) kunye namaqela amakhulu.
Le ndlu ifumaneka kwilali ekuthiwa yiMolln, embindini wepaki entle yelizwe iKalkalpen. Ikufutshane kakhulu embindini welali, uhamba nje imizuzu embalwa, kodwa ithe cwaka kakhulu.
Iflethi okanye indlu ekwicomplex enento yonke ine-120mwagen, igumbi elikhulu lokuhlala elinendawo yomlilo evulekileyo (iinkuni ziza kunikezelwa, ukuba kuyimfuneko. Iphakheji yokuqala yeplanga ifumaneka simahla, iphakheji elandelayo iza kubiza i-5€ nganye) kunye ne-mezzanine/igalari evulekileyo (enebhedi elala abantu ababini enye, iisentimitha eziyi-140x200). Ukongezelela, kukho amagumbi okulala amabini ahlukeneyo, igumbi lokutyela negumbi lokuhlambela elineshawa nebhafu.
Ehlotyeni indawo eyingqongileyo yindawo efanelekileyo yokunyuka intaba, yokuhamba ngebhayisekile, ukuhamba ngebhayisekile (indlu ikufutshane ne-24km STEYRTAL-CYCLING ROAD, eyenye yezona ndlela zintle zokuhamba ngebhayisekile eAustria kwaye ithandwa kakhulu ziintsapho) nezinye iindawo ezininzi (ukukhwela isikhephe, ukukhwela amahashe,...). Kukho amathuba amaninzi okuqubha kumachibi nakwiintaba ezicocekileyo.
Idolophu endala yaseSteyr kunye nedolophana entle yaseGmunden kwiTraunsee eSalzkammergut ziindawo ezintle onokuya kuzo.
Ngaphezu koko kukho ii-resort ezintathu zasebusika ezikufutshane (iHinterstoder, iWurzeralm, iKasberg, malunga nemizuzu eyi-30 nganye), kwaye kukho amathuba amaninzi okutyibilika ekhephini kwilizwe kunye nento yokutyibilika ekhephini yabantwana kwilali (imizuzu eyi-5 xa uhamba ngeenyawo).
4.95 · Izimvo eziyi-225
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Molln